Isihlungi se-China Disc seqabunga lediski enenkanyezi weld Ukwakha neFektri Hanke
Wire mesh ibhande 5-uthango mes ...
Wedge wire isihlungi screen sl ...
Isipina sokuphotha se-BOPP f ...
Isihlungi se-Sintered singa ...
Incwengiwe isihlungi sesici sesihlungi
Isihlungi se-disc se-disk se-disk esine-star weld
1. Indle ezosetshenzwa ingena kuleyunithi yokuhlunga kusukela ekungeneni kwamanzi;
2. Amanzi ageleza evela ngaphandle eqenjini lediski lokuhlunga aye ngaphakathi kweqembu lesihlungi sediski;
3. Lapho amanzi egeleza ngesiteshi esakhiwe yizimbambo ezimise okwezindandatho, izinhlayiya ezinkulu ukwedlula ukuphakama kwezimbambo ziyabanjwa bese zigcinwa esikhaleni esakhiwe izimbambo ezigobile kanye negebe eliphakathi kweqembu lesihlungi sediski negobolondo;
4. Ngemuva kokuhlunga, amanzi ahlanzekile angena ku-disc yokuhlunga emise okwezindandatho bese ekhishwa ngaphandle.
Idiski yesihlungi ekhiqizwe yi-Anping Hanke Filter Technology Co., Ltd.iyinto yokuhlunga ekahle yokuhlunga, ukuwasha kanye nokomisa imishini (ebizwa ngokuthi emithathu koyedwa).
Izinto zokuhlunga eziyinhloko zediski yesihlungi zenziwe nge-multilayer insimbi engagqwali sintered mesh. Ukunemba kokuhlunga kungu-1-200μm, ubukhulu bungu-200-3000mm, futhi isakhiwo sediski yesihlungi sinohlobo olubalulekile nolwehlukanisiwe.
Izici zediski yokuhlunga: ukuqina okuhle, amandla aphezulu, umjikelezo omude wokufaka esikhundleni, ukuhlanza okulula, umhlangano olula, njll.
Idiski yokuhlunga isetshenziswa kabanzi ezintweni ezintathu-in-nye nezimbili kokukodwa zokomisa impuphu nokuhlunga, imboni yamakhemikhali, kanye nokudla embonini yezemithi, esikhundleni somkhakha wendwangu yokuhlunga wendabuko.
Indlela yokuhlunga yediski yesihlungi ukubona inhlanganisela yokuhlunga ebusweni nokuhlunga okujulile nge-disc yokuhlunga ecindezelwe. Ubuchwepheshe bayo obuyisisekelo yi-filter disc, equkethe isethi yamacwecwe e-polypropylene anezinhlangothi ezimbili anezindawo ezinemigwaqo eyahlukene. Ama-disc amabili aseduze aphakanyisiwe, futhi imiphetho ye-groove ebusweni obusondelene yakha iziphambano eziningi. Le miphambanandlela yakha inqwaba yezimbotshana nezindima ezingajwayelekile, ezihlala zincipha zisuka ngaphandle ziye ngaphakathi. Uma kuhlungwa, lezi zindima ziholela ekugelezeni kwamanzi okuyisiphithiphithi, okugcina kudale ukuthi ukungcola emanzini kubanjwe ezimpambanweni zomgwaqo ezahlukahlukene. Uma isitaki samadiski esihlungi siphezulu futhi sifakwe kufreyimu wokuhlunga oyinhloko, iyunithi lokuhlunga elinokuqina okuxekethile kwangaphandle nangaphakathi kuzokwakhiwa ngaphansi kwengcindezi yamanzi entwasahlobo namanzi angenayo.
Izici zokusebenza kwediski yesihlungi:
1. ukuhlunga kahle
2. Ukuhleleka okujwayelekile, ukonga isikhala:
3. Ukusebenza okuzenzakalelayo ngokugcwele, okukhipha okuqhubekayo kwamanzi:
4. Impilo ende
5. Ikhwalithi ephezulu nokunakekelwa okuphansi
Imodeli D (mm) Hlunga indawo R (μm) Hlunga imidiya isakhiwo
Insimbi engagqwali sintered anezikhala
Isithombe1: Isakhiwo esihlanganisiwe: i-filter plate weld ne-plate support, ne-sub-unit ngayinye ixhunywe nama-bolts.
Olunye ucezu lwesakhiwo, ipuleti lokuhlunga lisondwe ngqo ngepuleti elinomkhuhlane, bese lishiselwa ku-flange
DF-1600-R 1600 Usayizi
I-DF1800-R 1800 2.54M2
DF-2000-R 2000 Usayizi
DF-2300-R 2300 Usayizi
DF-2400-R 2400 Usayizi
DF-2600-R 2600 Usayizi
DF-2750-R 2750 Usayizi
Langaphambilini Yethusi anezikhala zethusi nokwelukiweyo isitokwe
Olandelayo: Isihlungi sobisi lwe-emulsion lobisi Nge-Tri Clamp / Welded / Threaded / flanged Pipe Fittings
Inkinobho Hlunga Disc
I-Disc Filter Element
Isihlungi se-Extruder Disc
Isihlungi seLeaf Disc
Isihlungi seLeaf Disc Filter
Isihlungi seplastikhi yePulasitiki
Isihlungi se-Polymer Leaf Disc
Isihlungi seDiski Yokuzihlanza
Isihlungi se-Ss Disc
Isihlungi se-Stailess Steel Disc
Wire Mesh Hlunga Disc
Perforated tube isibhakela tube isihlungi ne ...
Wedge wire isihlungi slot isihlungi ipayipi esebenzayo ...
Ezifincizekile ezifana nezimpande isihlungi element microporous eligoqiwe filte ...
Isihlungi Sintered element ikhandlela isihlungi effi okusezingeni eliphezulu ...